Taliyihii ciidamada Kumaandooska ee Turkigu u tababaray Soomaaliya & Wasiirka Amniga oo lug ku yeeshay.
October 18, 2019 Mahad Jama 1
MUQDISHO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa sheegaya in caawa la dilay Taliyihii ciidamada Kumaandooska Soomaaliya ee loo yaqaano GORGOR oo ay dhawaan soo tababartay udawladda Turkiga iyo Ilaaladiisii.
Maxaadeey Saleebaan oo ah Sarkaal firfircoon oo si weyn uga dhex muuqday howlgalada la dagaalanka Argagixisada ee kasocda duleedka caasumada ayaa lagu dilay gudaha magaalo madaxda dalka, dilkaas oo shaki weyn ka taagan yahay.
Wararka ayaa sheegaya in Taliyahan iyo ilaaladiisa ay dilkooda ka dambeeyeen ciidamada Ilaalada Hotelka Maa’ida, horeyna loo oran jiray Naasahablood 2 ee magaalada Muqdisho.
Ilaalada Hotelkan ayaa gaariga Taliyaha ku amartay in kala wareego, iyadoo markii ay amarka qaateen ka dibna rasaas xoog leh ay ilaaladu ku fureen, sidda ay sheegayaan wararka la helayo.
Laamaha Ammaanka oo goobta yimi, waxaana soo baxaya warar kala duwan oo dhacdadan ku gadaaman.
Hotelkan, wuxuu u kireysan yahay wasiirka Amniga ee dawladda Soomaaliya iyo mid kamid ah qaraabadiisa, iyadoo ay wararku sheegayaan in hadda lagu jiro sidii baaritaan loogu sameyn lahaa dhacdadan.
Taliyaha la dilay ayaa horey u ahaa Taliyihii ciidamada Khaaska ah ee Shariif Sheekh Axmed, markii u ahaa Madaxweynaha dawladdii KMG ahayd ee Soomaaliya, balse markii laga guuleystay ayuu ka mid noqday ciidamada xooga dalka oo uu horey uga tirsanaa.
Warka waa cadyahey madaama u aha illaahii kowaad ee sheekh shariif markuu madxweynah ahaa hadna yahey nin hogaamiya ciidan xoogan wax kaliya dila karaa wa laba urur ciidnaka nabd sugid somaliya oo ah ah hada cidaan qaas u ah farmajo oon aheyn cidan qaran iyo al shaab waxaan 100% madaaama dawlada farmajo fakar isku soo ho jedan sheekh shariif iyadaa dishey ninkaa sarkaalka ah